Yakavanzika Policy – Dzvanya apa kuti utange kupfupisa iyo URL.
Dzvanya apa kuti utange kupfupisa iyo URL.
Kupfupisa URL ne analytics, geo-kunanga, chinongedzo chekutevera, API, kuwanda kwekubatanidza kupfupisa kubva kune faira, uye kubiridzira kwekudzivirira kubva kumapurogiramu ehukama.
https://shortest.link Yakavanzika Policy
Iyi yekuvanzika mutemo yakanyorwa kuti ishandire zvirinani kune avo vane hanya nemashandisirwo avo ‘Ruzivo Runozivikanwa’ (PII) ari kushandiswa online. PII, sekutsanangurwa mumutemo wekuvanzika kweUS nekuchengetedzwa kweruzivo, ruzivo runogona kushandiswa rwoga kana nerumwe ruzivo kuziva, kubata, kana kutsvaga munhu mumwe chete, kana kuziva munhu mune mamiriro. Ndokumbirawo kuti muverenge zvedu zvakavanzika mutemo kuti uwane kunzwisisa kwakajeka kwenzira yatinounganidza, kushandisa, kudzivirira, kana neimwe nzira kubata Ruzivo Rwako Runozivikanwa Zvinoenderana newebsite yedu.
Ndeapi ruzivo rwemunhu pachedu rwatinounganidza kubva kuvanhu vanoshanyira blog yedu, webhusaiti, kana app?
Kana uchihodha kana kunyoresa pane yedu saiti, sezvazvinokodzera, unogona kukumbirwa kuisa yako Yakareba Url, Pfupi Url, kana zvimwewo zvinhu kuti zvikubatsire iwe neruzivo rwako.
Tinounganidza rini ruzivo?
Isu tinotora ruzivo kubva kwauri kana iwe uchizadza fomu kana kuisa ruzivo pane yedu saiti.
Tinoshandisa sei ruzivo rwako?
Tinogona kushandisa ruzivo rwatinotora kubva kwauri kana iwe uchinyoresa, kutenga, kusaina tsamba yedu, kupindura kuongororo kana kushambadzira kutaurirana, kusefa webhusaiti, kana kushandisa zvimwe zvesaiti maficha nenzira dzinotevera:
Kuvandudza webhusaiti yedu kuti tikushandire zviri nani
Tinodzivirira sei ruzivo rwako?
Isu hatishandise kunetseka kuongorora uye / kana kuongorora kune PCI zviyero.
Isu tinongopa zvinyorwa uye ruzivo. Hatimbobvunze manhamba emakadhi echikwereti.
Isu tinoshandisa yakajairwa Malware Kuongorora.
Rwako ruzivo rwunowanikwa mumashure akachengetedzwa manetwork uye inongowanikwa chete nevanhu vashoma vane kodzero dzakakosha dzekuwana kune masisitimu akadaro, uye vanodikanwa kuchengetedza ruzivo rwacho zvakavanzika. Uyezve, rwese ruzivo / ruzivo rwechikwereti iwe rwaunopa rwunonyorwa kuburikidza neiyo Yakachengeteka Socket Layer (SSL) technology.
Isu tinoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza kana mushandisi achipinda, achiisa, kana kuwana ruzivo rwavo kuchengetedza kuchengetedzeka kwemashoko ako ega.
Zvese zviitiko zvinotengeswa kuburikidza neanopa gedhi uye hazvichengetwe kana kugadziriswa pane edu maseva.
Isu tinoshandisa ‘makuki’?
Ehe. Cookies mafaera madiki ayo saiti kana mupi wayo webasa anoendesa kune hard drive yekomputa yako kuburikidza neWebhu browser yako (kana iwe uchibvumira) iyo inogonesa saiti kana sisitimu yemupi webasa kuona browser yako uye kutora uye kurangarira rumwe ruzivo. Semuenzaniso, isu tinoshandisa makuki kutibatsira kuyeuka nekugadzirisa zvinhu zviri mungoro yako yekutengera. Izvo zvinoshandiswa zvakare kutibatsira kuti tinzwisise zvaunofarira zvichibva pane yapfuura kana yazvino saiti chiitiko, izvo zvinoita kuti tikwanise kukupa iwe nekuvandudza masevhisi. Isu tinoshandisawo makuki kutibatsira kuumbiridza akaunganidzwa data nezve saiti traffic uye saiti kudyidzana kuitira kuti tikwanise kupa zvirinani saiti zviitiko uye maturusi mune ramangwana.
Isu tinoshandisa makuki ku:
• Chengetedza kushambadza.
• Unganidza huwandu hwe data nezve saiti traffic uye nekubatana kwenzvimbo kuitira kuti upe zvirinani zviitiko zvesaiti nematurusi mune ramangwana. Isu tinogona zvakare kushandisa akavimbika echitatu-bato masevhisi ayo anoteedzera iyi ruzivo akatimiririra.
Unogona kusarudza kuti komputa yako ikuyambire iwe nguva yega yega kuki painotumirwa, kana iwe unogona kusarudza kudzima makuki ese. Iwe unoita izvi kuburikidza nebrowser yako marongero. Sezvo bhurawuza iri yakati siyanei, tarisa kubrowser Renyu Menyu kuti udzidze nzira chaiyo yekushandura makuki ako.
Kana iwe ukadzima makuki, Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti yako saiti ruzivo ibudirire inogona kusashanda nemazvo. Izvo hazvizokanganisa ruzivo rwevashandisi izvo zvinoita kuti yako saiti ruzivo inyatsoita uye inogona kusashanda nemazvo.
Hatitengesi, kushambadzira, kana neimwe nzira kuendesa kunze kwemapati Ruzivo Rwako Runozivikanwa kunze kwekunge isu tapa vashandisi kufanozivisa. Izvi hazvisanganise vanobata webhusaiti webhusaiti uye mamwe mapato anotibatsira mukushandisa webhusaiti yedu, kuitisa bhizinesi redu, kana kushandira vashandisi vedu, chero bedzi mapato aya achibvumirana kuchengeta ruzivo urwu zvakavanzika. Tinogona zvakare kuburitsa ruzivo kana rwaburitswa rwakakodzera kutevedzera mutemo, kumanikidza yedu saiti marongero, kana kuchengetedza kwedu kana kodzero dzevamwe, chivakwa kana kuchengetedzeka.
Nekudaro, ruzivo rwusinga-zivikanwe rwevashanyi runogona kupihwa kune mamwe mapato kushambadzira, kushambadzira, kana kumwe kushandiswa.
Dzimwe nguva, mukufunga kwedu, isu tinogona kusanganisira kana kupa chechitatu-bato zvigadzirwa kana masevhisi pane yedu webhusaiti. Aya echitatu-bato saiti ane akapatsanuka uye akazvimirira ega maitiro. Isu, saka, hatina mutoro kana mutoro wezviri mukati uye zviitiko zveaya masayiti akabatanidzwa. Kunyange zvakadaro, isu tinotsvaga kuchengetedza kuvimbika kwenzvimbo yedu uye nekugamuchira chero mhinduro pamusoro pesaiti idzi.
Zvinodiwa neGoogle zvekushambadzira zvinogona kupfupikiswa neGoogle’s Advertising Principles. Ivo vanoiswa munzvimbo kuti vape yakanaka chiitiko kune vashandisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Isu tinoshandisa Google AdSense Kushambadza pane yedu webhusaiti.
Google, seyechitatu-bato mutengesi, inoshandisa makuki kushambadzira kushambadziro pane yedu saiti. Kushandiswa kweGoogle nekuki yeDART kunoigonesa kushambadzira kune vashandisi vedu zvichibva pakushanya kwamberi kwesaiti yedu uye mamwe mawebhusaiti paInternet. Vashandisi vanogona kusarudza-kubva mukushandisa iyo DART kuki nekushanyira Google Ad uye Zvemukati Network zvakavanzika mutemo.
• Kutangazve neGoogle AdSense
• Google Ratidza Network Impression Kuzivisa
• Huwandu hwevanhu uye Kufarira Kushuma
• DoubleClick Platform Kubatanidzwa
Isu, pamwe nevatengesi vechitatu-bato senge Google tinoshandisa makuki ekutanga-bato (senge maGoogle Analytics makuki) uye makuki echitatu-bato (senge DoubleClick kuki) kana mamwe madhivhizeti echitatu-pamwechete kuti tibatanidze data maererano nekubatana kwevashandisi kuratidzwa kwekushambadzira uye mamwe mabasa ebasa kushambadzira sezvo achienderana newebhusaiti yedu.
Vashandisi vanogona kuseta zvavanofarira kuti Google inoshambadzira sei kwauri uchishandisa iyo Google Ad Zvirongwa peji. Neimwe nzira, iwe unogona kusarudza kubuda nekushanyira iyo Network Advertising Initiative Opt Out peji kana kushandisa Google Analytics Opt Out Browser wedzera.
Ndeapi data anotora reCAPTCHA?
Chekutanga pane ese reCAPTCHA algorithm inoongorora kana paine Google cookie pakombuta iri kushandiswa.
Shure kwaizvozvo, imwezve yakatarwa reCAPTCHA kuki ichawedzerwa kubrowser yemushandisi uye ichatorwa – pixel nepikisheni – mufananidzo wakazara wewindows browser yemushandisi panguva iyoyo.
Zvimwe zvebrowser neruzivo rwevashandisi parizvino zvakatorwa zvinosanganisira
Makuki ese akaiswa neGoogle mumwedzi mitanhatu yekupedzisira,
Mangani mbeva makwikwi iwe wawakagadzira pane iyo skrini (kana kubata kana pane chinobata mudziyo),
Iyo CSS ruzivo rweiyo peji,
Mutauro unowanikwa mubrowser,
Chero ipi plug-in yakaiswa mubrowser,
California Online Yakavanzika Dziviriro Mutemo
CalOPPA ndiwo wekutanga mutemo wenyika murudzi kuda mawebhusayithi ekutengesa uye masevhisi epamhepo kutumira mutemo wepachivande. Kusvika kwemutemo kunotambanuka kupfuura California kuda chero munhu kana kambani muUnited States (uye zvinofungidzirwa kuti nyika) inoshandisa mawebhusaiti kuunganidza Ruzivo Runozivikanwa Kubva kune vatengi veCalifornia kutumira mutemo unozivikanwa wepachivande pawebhusaiti yavo uchinyatsotaura ruzivo rwuri kutorwa uye idzo vanhu kana makambani airi kugovaniswa nawo. – Ona zvimwe pa http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Zvinoenderana neCalOPPA, tinobvumirana kune zvinotevera:
Vashandisi vanogona kushanyira yedu saiti zvisingazivikanwe.
Kana kodhi yekuvanzika iyi ikagadzirwa, isu tinowedzera chinongedzo kwiri pane peji rekumba kwedu kana sepashoma, pane yekutanga peji rinokosha mushure mekupinda webhusaiti yedu.
Yedu Yakavanzika Policy inongedzo inosanganisira izwi rekuti ‘Kuvanzika’ uye inogona kuwanikwa zviri nyore pane peji rakataurwa pamusoro.
Iwe uchazoziviswa nezve chero Yakavanzika Policy shanduko:
Pane Peji Yedu Yekuvanzika
Unogona kuchinja ruzivo rwako pachako:
• Nokutumira tsamba paemail
Saiti yedu inobata sei Usateedzere mamaki?
Isu tinokudza Usateedzere masaini uye Usateedzere, sima makuki, kana kushandisa kushambadzira kana Yega Usateedzere (DNT) browser mashandiro ari munzvimbo.
Yedu saiti inotendera yechitatu-bato maitiro ekuteedzera?
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti isu tinotendera wechitatu-bato maitiro ekuteedzera
COPPA (Vana Pamhepo Chakavanzika Chekuchengetedza Mutemo)
Kana zvasvika pakutora ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu ekuberekwa, iyo Yevana Pamhepo Chakavanzika Chekuchengetedza Mutemo (COPPA) inoisa vabereki mukutonga. Federal Trade Commission, United States ‘agency inodzivirira vatengi, inosimbisa iyo COPPA Rule, iyo inoratidza izvo zvinofanirwa kuitwa nevashandisi vemawebhusaiti uye epamhepo mabasa kuchengetedza hunhu hwevana nekuchengeteka pamhepo.
Hatinyatso kushambadzira kuvana vari pasi pezera re13 makore.
Isu tinorega vechitatu-mapato, kusanganisira ad network kana plug-ins, kuunganidza PII kubva kuvana vari pasi pegumi nematatu?
Yakanaka Ruzivo Maitiro
Iwo Maonero Akanaka Ekuita Maitiro anoumba musana wemutemo wekuvanzika muUnited States uye pfungwa dzavanosanganisira dzakatora chinzvimbo chakakosha mukuvandudzwa kwemitemo yekuchengetedza data kutenderera pasirese. Kunzwisisa Maonero Akanaka Ekuita Maitiro uye mashandisiro avanofanira kuita zvakakosha kutevedzera dzakasiyana siyana zvakavanzika mitemo inochengetedza ruzivo rwemunhu.
Kuti tigone kuenderana neFair Information Practices isu tinotora inotevera inoteerera chiito, kana kukanganisa kwedata kukaitika:
Isu tichazivisa vashandisi kuburikidza ne-saiti ziviso
• Mukati memazuva manomwe ebhizinesi
Isuwo tinobvumirana neIye Individual Redress Nheyo iyo inoda kuti vanhu vave nekodzero yekutevedzera zviri pamutemo kodzero dzinomanikidzwa kune vanotora data uye ma processor vanokundikana kutevedzera mutemo. Iyi nheyo haidi chete kuti vanhu vane kodzero dzinomanikidzirwa kupesana nevashandisi ve data, asiwo kuti vanhu vanotsvaga kumatare kana vamiriri vehurumende kuti vaongorore uye / kana kutongesa kusateedzera kunoitwa nevanoongorora data.
Mutemo weCAN-SPAM mutemo unogadza mitemo yeemail yekutengesa, unogadza zvinodiwa kuti utumire mameseji ekutengesa, unopa vanogashira kodzero yekuti maemail amiswe kubva kutumirwa kwavari, uye anotsanangura zvirango zvakaoma zvekutyora.
Isu tinotora yako email kero kuitira kuti:
Kuita zvinoenderana neCANSPAM, tinobvumirana kune zvinotevera:
• Kwete kushandisa zvenhema kana zvinotsausa zvidzidzo kana email kero.
• Ziva meseji seyekushambadzira neimwe nzira ine musoro.
• Sanganisira kero chaiyo yebhizinesi redu kana saiti dzimbahwe.
• Wongorora chechitatu-bato email kushambadzira masevhisi kutevedzera, kana imwe ikashandiswa
• Kudza kusarudza kubuda / kusabvisa zvikumbiro nekukurumidza.
• Bvumira vashandisi kuzvinyoresa nekushandisa iyi link pazasi peemail imwe neimwe.
Kana chero nguva iwe yaungade kuzvinyoresa kubva pakugamuchira maemail emangwana, unogona kutitumira email pa
abuse@shortest.link uye isu tinokurumidza kubvisa iwe kubva KWESE tsamba.
Kana paine chero mibvunzo maererano neyakavanzika mutemo, unogona kutirovera runhare uchishandisa irwo ruzivo pazasi.
Yakapedzisira Kugadziridzwa pa2021-01-11
Dhairekitori re URL kupfupisa
Ipfupi yekubatanidza marangi ezvikumbiro zvinotyisa
Sarudza zvinodiwa maficha
Kupfupisa URL isina rejista
Yakawanda Bulk URL kupfupisa
Tsika ipfupi URL
Kubiridzira kubva kumapurogiramu ehukama
Features: Link yekutevera
URL shorteners (5)
Pfupisa URL isina kushambadzira
Yakawanda Bulk URL ipfupi
Dzvanya apa kuti utange kupfupisa iyo URL. Proudly powered by WordPress